MAXAA LAGA KARIYAA KARO HADHUUDH QASACADAYSAN: SIDA CUNTADA LOO KARIYO, SIDA LOO SAMEEYO CANJEELADA, MARAQ, MARAQ, SAXANKA BARIISKA IYO DIGIRTA, WIXII KALE EE AAD ISKU DHAFAN KARTID KHUDRADDA? - KHUDRADDA
Cunnooyinka iyo dhadhanka dhadhan leh ee laga helo miraha qasacadaysan: Maxaa la kariyaa laga bilaabo qudaar qorrax leh?
Corn ... Yaan jecel qoraxdaas? Qof kastaa wuxuu rajeynayaa inuu bilaabo xilliga xagaaga si uu u cuno quraarado huruud ah. Laakiin waxa la sameeyo marka aanad heli karin hadhuudh cusub? Dabcan, cun cunto qasacadaysan. Nasiib wanaag, waxaad ka heli kartaa dukaanka iyo wakhti kasta.
Tilmaamaha aad cuni kartid siiriyaalka, faa'iidooyinka iyo faa'iido daruuriga ah ee hadhuudhka qasacadaysan, iyo sidoo kale cuntooyinka tallaabo tallaabo ah, waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan.
Waa maxay sheygan?
Cuntada qasacadaysan way ka duwan tahay hadhuudh cusub hadhuudh sonkor ah iyo kalooriyaal badan. Marka labaad, way yar yihiin. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in biyaha, kuleeylaha badeecadda, kicinayaan foosha nafaqada.
DAREEN: Hooska, saamiyada waxaa lagu kaydin karaa ilaa laba sano. Laakiin weelka dhalada ee nolosha shelf ayaa sii kordhisa oo gaadho saddex sano.
Faahfaahin ku saabsan sida loo ilaaliyo hadhuudhkii guriga ee xilliga qaboobaha, halkan ka akhri.
Faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka quruxda qoraxda
Guryo waxtar leh:
Qayb ka mid ah heerka caadiga ah ee heerarka sonkorta dhiigga, taas oo muhiim u ah sonkorowga.
Wuxuu ka caawiyaa la dagaallanka bararka, isagoo lahaanaya siyaabo lagu durayo iyo choleretic. Marka la eego, waxaa lagugula talinayaa hypertensive.
Caadi ahaan wadnaha iyo nidaamka wadnaha ee wadnaha oo dhan guud ahaan heerkulka sare ee magnesium.
Aaladda la isku qurxiyo oo la yareeyo waxay hoos u dhigtaa kolestaroolka, waxay dishaa jimicsiyada atherosclerotic.
Waxay ka caawisaa isku-dhafidda ama dadka qaba dheef-shiid kiimikaad oo daciif ah, iyada oo xakameynaya iyo yaraynta cuntada.
Waxay hagaajineysaa shaqeynta nidaamka dareenka oo dib u soo celiya. Thiamine, niacin iyo fitamiin B waxay la qabsadaan shaqadan.
Saameyn wanaagsan oo ku saabsan caafimaadka dadka qaba cudurka dhiig yari iyo poleniephritis.
Waxay kaa caawineysaa inaad la qabsato daal maskaxeed, dareen kacsan.
Miyir beel la'aanta.
Kashaqeynta khamriga khamriga iyo saameynta cunto karinta.
Nasiib daro, hadhuudhka qasacadaysan ayaa ka hortagaya in badan oo aan la socon.. Waa wax aan loo baahnayn dadka si ay u isticmaalaan sheygan:
oo ka cabanaya cudur boogta ah;
haysashada coagulability sii kordhaya;
u nugulta xinjir dhiig;
oo leh miisaan xad dhaaf ah;
maaha in uu badeecad u qaato.
MUHIIM: Ha siin roodhida qasacadaysan carruurta saddex sano jirka ka yar - uma dulqaadan doonaan badeecad aad u culus u ah caloosha. Khabiiradu ma kugula talinayaan in ay cunaan hadhuudh dad aad u khafiif ah, maadaama ay dalagyadani dareen dareemo gaajo.
Fiiri fiidiyowga ku saabsan faa'iidooyinka iyo waxyeelada hadhuudhka:
Maxaa la samayn karaa marka lagu daro khudradda: cuntada sida caadiga ah
Qalabka malaaku waa nooc sax ah oo lagu ilaaliyo soonka. Dhadku ma beddelayo sheyga cusub. Waxaad ku qaadan doontaa saacad si aad u diyaariso saxan.
100-150 garaam oo hadhuud ah (laga bilaabo);
30 garaam oo labeen dhanaan ah;
25 garaam oo subag;
nus baraf oo ah semolina;
kala badh kalana
Ku rid galliska digsi oo ku shub caanaha. U oggolow in aad diiriso 5-10 daqiiqo.
Ka dibna ku dar semolina iyo 5 garaam oo subag, fuud badan isla waqti isku mid ah. 10 daqiiqo ka dib, ka qaad kuleylka iyo ha qaboobin.
Hammer kala badh ukumaha, cusbo iyo ku dar dhir ama dill.
Samee cutlets oo waxaad ku karkarisaa subagga labada dhinac.
Markaad u adeegeyso, ku shub subagga (haragga) iyo labeen dhanaan.
Baked Frozen Frozen Potatoes
200 garaam oo jiis ah;
3 naaso digaag;
sida nalalka badan;
weelka miraha qasacadaysan;
Saliidda wax lagu kariyo saliidda. Xardhi ilaa basbeelka.
Safafka dhaadheer: qaanso; naaska la jarjaray; hadhuudh la jarjaray (ka dibna la jarjaree majones); Taarbo baradho ah; jiiska jiiska (lakabkaan sidoo kale waxaa lagu shubay majones).
Kajirso haramka oo dhan horteeda (laakiin ma aha ilaa calaamadda ugu saraysa) foornada illaa 30 daqiiqo.
Karootada leh basbaas casiirkooda
2-3 barkin waaweyn oo buluug ah iyo karootada waaweyn;
weelka miraha qasacadaysan.
Madaarka iyo karootada nadiif ah. Biyo dareeraha ka soo bax. Iska yaree dabacasaha iyo basbaaska bukaanka khafiifka ah.
Dhammaan maaddooyinka ku jira digsi leh subagga dhalaalay. Ku dar milix iyo dhir udgoon.
Karso ilaa 20 daqiiqo, hubi diyaargarowga jilicsanaanta dabacasaha.
laba xabbadood oo toon ah;
bir ah oo ah hadhuudh qasacadaysan;
2 qaado oo ah keega yaanyo;
1 saliid saytuun ah oo saliid saytuun ah;
dhulka basbaaska madow, cusbo dhadhan.
Basal shiil ilaa dabayl dahab ah.
Ku dar toonta iyo hadhuudhka la jarjaray oo sii wad raashin 5 daqiiqo oo kale.
Si taas oo dhan, gelin jinka yaanyo, zucchini jarjaran iyo dhir udgoon.
Iska ilaali daboolka kulaylka yar ilaa inta ay jucchini jilicsan yihiin.
Markaad adeegayso, qurxin saxanka leh jiiska riigga ah iyo basbaas yaryar.
Hilibka cunnada ee Mexico
800 garaam oo yaanyo ah (cusub ma shaqeyn doono);
0.5 kg ee digirta iyo hilibka lo'da;
400 garaam oo hadhuudh qasacadaysan;
120 garaam oo cagaaran qasacadaysan;
sida jiiska badan ee cheddar;
basbaas iyo basbaas buluug ah oo nuqul ah;
6 tsp. basbaaska yar yar, dhulka;
2 tsp Qufac (sidoo kale dhulka);
1 tsp Marjoram la qalajiyey;
dhulka basbaaska madow, dhir, cusbo dhadhan.
Fiiri shiil ilaa shan daqiiqo, halka si joogto ah kareyso.
Ka dibna ku dar basasha, toonta, basbaaska macaan ee digsi qabow, ka dibna ku dar digirta, hadhuudh iyo basbaas qadhaadh ah. U istaag kulaylka yar.
Ku bilaw dhammaan noocyada dhirta kor ku xusan ee qashinka mashiinka.
Cajiinka yaanyada ee mushqusha oo ku dar intaad ku jirto maaddooyinka, ku dar milix iyo basbaas.
Iska ilaali dhamaantiis ilaa samaynta isku dhaf adag.
Ka dib markii ay ka saareen duufaanka dabka iyo jajabka badhkii jiiska iyo jiir. Daboolka dabool mar labaad oo u ogolow in aad wax yar ku dhaqdid.
Markaad u adeegeyso, kula saydhaa inta kale ee jiiska.
digir cagaar - 2 qaado;
hadhuudhka qasacadaysan - 0.5 dhalooyinka;
saliid saytuun (waa macquul iyo gabbaldaye) - laba qaado oo miisaan leh;
karootada, celery, baradhada - dhammaan qaybahan mid ka mid ah;
nus litir oo caano ah;
1 qaado oo bur ah oo bur ah;
Dhammaan khudradda ayaa la jarjarey.
Waxaad shiishaa basasha, toonta iyo celery ee subagga ilaa bunka dahabka ah.
Ku dar karootada oo dabka ku hay 3 daqiiqo oo kale.
Ku dar bur, kadibna caano. Wax kasta oo dhan isku walaaq oo isku kari.
Ku dar barandhiga la jarjaray oo ku karsan kuleyl dhexdhexaad ah ilaa 20 daqiiqo.
Ku dar digir iyo hadhuudh iyo ku kari 5 daqiiqo kale.
Saliid ee doorashooyinka dhadhanka.
Ka dib marka laga saaro kulaylka, saxada ayaa isla markiiba diyaar u ah isticmaalka.
Waxay u muuqdaan kuwo la mid ah cutlets, laakiin waxaa loogu yeeraa taas sababta oo ah waxaa lagu ridayaa digsi qabow leh qaaddo. Waxaa loo adeegsan karaa saxan dhinaca, iyo sida saxan madax banaan.
iyo weel lagumase tuso;
mid hal celcelis ah iyo basasha;
3 qaado oo ah semolina;
2 qaado oo bur ah oo heerkul sare ah (waxaad isticmaali kartaa sarreen iyo galley labadaba);
cusbo, dhir udgoon inuu dhadhamo;
cagaarka (dhir, dill);
saliid gabbaldayaha (waxaa loo baahan doonaa inta lagu jiro saliidda cutlets).
Karootada la kariyey iyo basasha qashinka lagu daro hadhuudh, waxay u diraan cagaarka iyo qadar yar oo dareere ah oo ka soo baxa hadhuudhka.
Ka dibna ku shub semolina iyo bur. Iska ilaali qiyaasta oo dhan qaaddo, kadibna u diyaari ilaa 15 daqiiqo si ay semolina u nuugto dareeraha xad-dhaafka ah.
Saliid, ku dar dhir udgoon.
Iska ilaali digsiga horay, faafin boorash oo ku sii daa ilaa 3-5 daqiiqadood dhinaca dhinac kuleylaha hooseeya.
Suxuunta bariiska iyo digirta
TALO: Tani waa saxan cajiib ah oo lagula taliyay inay u adeegto saxan dhinaca hilibka ama kalluunka.
1 koob oo bariis ah;
laba jeer biyo badan;
nus koob oo ah hadhuudh;
sida digirta badan;
hal nuqul oo ah karootada iyo basbaaska dawan;
2 qaado oo ah suugo subag;
xaddiga isku midka ah ee subagga;
karinta saliidda ee saliidda.
Peel karootada iyo basbaaska, jarjar xabadaha yar yar.
Cunto saliid gabbaldayaha digsi, ku dar khudaarta jarjaran.
Fry kulaylka ku yaraa ilaa 5 daqiiqo, ka dibna ku dar buundada iyo digirta. Ha ilaawin inaad qaybaha isku dhafto sida ugu macquulsan.
Isku kari ilaa 10 daqiiqo.
U dixi ukunada qafis gaar ah, iyaga oo isku dardaraya.
Bariisku wuxuu keenaa diyaar. Haddii ay jiraan biyo xad-dhaaf ah, ka takhalus.
On digsi kale digsi, ku diiri subagga, ku shub suugo soy galay.
Shub bariiska la kariyey iyo wax kasta oo fiican isku daraan.
Bariiska bariiska dhowr daqiiqo.
Si uu u dhigo khudaarta iyo ukunta.
U adeegso kulul. Waxaad qurxin kartaa digaagga dhir ama dill.
Ku raaxeyso cuntada!
Corn waxa loo tixgeliyaa geedka qadiimiga ah ee ugu weyn adduunka. Nafaqooyinka ayaa ku jira labadaba miro iyo caleemaha. Akhriso alaabtayada faa'idooyinka jajabka jaalaha ah iyo karinta cuntada, boorash, galley, saladhyo, oo ay ku jiraan ulaha dillaacsan, iyo sidoo kale sida loo shiilo iyo si habboon u marin.
Waxaan ku liis garaynay fursado yar oo cunto karis ah, waxaana dhici karta inay jiraan dad badan. Waxaad kala duwanaan kartaa intaad kariska sameyneyso, bedelida walax kasta oo ku xiran doorashooyinka kuwa aad u karineyso.
Sida aan aragno Corn waa midab kala duwan oo kala duwan, iyo ugu muhiimsan - faa'iido leh. Qof kastana wuxuu awood u leeyahay inuu helo cunto sax ah oo naftiisa u ah: labada lafo iyo khudradda. Iyo si aad u kariyo suxuuntaas ma noqon doonto mid adag, xitaa khudbada aan la aqoon.
Sidaa daraadeed waxaad xor u tahay inaad maalin waliba ku dhufatid raashinka ka soo baxa sheyga qoraxda iyo adiga iyo qoyskaagaba. Ka dib, oo dhan, si aad u fiican oo, sidoo kale, qadada asalka ah ama casho, ma jirto baahi loo qabo cudurdaar, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad rabto in aad naftaada wax ka qabato. Laakiin ha iloobin qiyaasta lagu taliyey ee isticmaalka badarka, sababtoo ah wax walbaa waa fiican marka ay caadi tahay. Waxaan u maleynayaa in qof kastaa uu xasuusiyo wixii nagu soo noqday si aan uga badino hadhuudhka ilmo ahaan, cidna ma rabto inay tan ku celiso.